Xanuunka cagta - sababaha, ogaanshaha, daaweynta.
Xanuun ku dhaca cagaha iyo qaababka u dhow waxay noqon karaan kuwo aad u dhib badan - uguna yaraan, waxay u horseedi kartaa xanuunno magdhow meelo kale, sida jilbaha, miskaha iyo dhabarka Dhaawacyada lugta waxaa sababi kara arrimo kala duwan, laakiin kuwa ugu caansan waa murqaha, kala goysyada iyo xanuunka lugaha oo ay sabab u tahay xad-dhaaf, dhaawac, murugo, muruq-xanuun murqaha iyo hawl-qabad farsamo. Xanuunka ku dhaca cagaha ama cagaha waa buuq saamaynaya qayb badan oo dadka ka mid ah.
Nagala soo xiriir maanta boggayaga Facebook, goobta faallada ee maqaalkan ama iyada oo loo marayo «Weydii - Hel Jawaab!«Qeybta haddii aad qabtid su'aalo ama aad u baahan tahay talo ku saabsan sida ugu wanaagsan ee laguu hormarin karo.
Hoos u dhaadhac si aad u aragto laba fiidiyoow jimicsiga weyn oo leh laylisyo kaa caawin kara xanuunka cagtaaga.
VIDEO: 6 Layli Oo Lagaga Soo Horjeedo Plantar Fascitt
Plantar fascitis (xanuun ka soo baxa saxanka lugta ee lugta ka hooseeya) ayaa ah sababaha ugu badan ee xanuunka lugta. Xaaladda waxaa sababa ciriiriga iyo ciriiri yar oo ku dhex jira xubnaha galka lugta hoostiisa. Adeegsiga joogtada ah ee barnaamijkan jimicsiga wuxuu kaa caawin karaa inaad kordhiso wareegga dhiigga ee maxalliga ah, furfuri dareysyada xannuunnada xasaasiga ah iyo murqaha, iyo inaad si fiican u baqaan jilicsanaanta dhirta. Hoos guji si aad u aragto layliyada.
VIDEO: 5 Layli Oo Ka Soo Horjeeda Xanuunka iyo Xanuunka Caloosha
Halkan waxaad ka heli doontaa barnaamij jimicsi oo wanaagsan oo kaa caawin kara muruqyada xasaasiga ah ee xanuunka, jileeca iyo dareemayaasha cagahaaga. Barnaamijkani wuxuu ku siin karaa fallaadho xoog leh, waxay kaa yarayn kartaa saxanka lugta lugtooda oo waxay hagaajin kartaa wareegga dhiiggaaga. Waa in la sameeyaa laba illaa saddex jeer usbuucii ugu yaraan 12 toddobaad natiijooyinka fiicnaanta.
Plantar fasciitis & ciribta ciribta: Qaar ka mid ah sababaha ugu caansan ee xanuunka daba dheeraada iyo xanuunka lugta
Plantar fasciitis waxaa sababa dhaawac soo gaara unugyada muruqyada cagtiisa cagteeda. Cilad-baadhitaankani wuxuu had iyo jeer ka kooban yahay dhowr arrimood, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in saxanka murqaha ee dhinaca hoose ee cagtiisa cagta iyo cidhifka hore ee lafta ciribta uu aad u culus yahay isla markaana ay unugyada aan shaqeynin ay dhacaan. Unuggan dhaawacan wuxuu leeyahay dareen xanuun badan (wuxuu soo saaraa calaamado xanuun badan), wuu shaqeynayaa marka loo eego nuugista shoogga iyo wareejinta miisaanka, unugyada dhaawacmayna sidoo kale waxay yareeyeen wareegga dhiigga iyo awoodda bogsiinta. Qaabka ugufiican ee dokumenti ahaan loo daweeyo xanuunada noocaas ah waa daaweynta mowjadaha cadaadiska - hab daaweyn ah oo ay fuliyaan daaweeyayaasha sida guud loo oggol yahay (lafopractor, fiisiyoteriga ama daaweeyaha gacanta) oo leh qibrad qibrad u leh qiimeynta iyo daaweynta baaritaanka muruqyada, muruqyada, kala goysyada iyo neerfaha.
Waxaan u maleynaynaa inay tahay mid aad u tusaalayn ah inaan ku tusno muuqaal fiidiyoow ah oo dhameystiran meesha laga isticmaalo Shockwave Therapy (qaab casri ah oo si wanaagsan loo diiwaangeliyey oo daaweyn ah) oo ka dhan ah ogaanshaha cudurka 'fasciitis plantar'. Cadaadiska mowjadaha cadaadiska ayaa sidaas ku jajabinaya nudahaan waxyeellada leh (oo aan ahayn inuu halkaas joogo) wuxuuna bilaabaa nidaam dayactir ah oo si tartiib tartiib ah, dhowr daaweyn, ugu beddelaya muruq cusub iyo mid cusub.
Fiidiyow - Daaweynta cadaadiska cadaadiska ee ka dhanka ah Plantar fasciitis (dhagsii sawirka si aad u aragto fiidiyowga)
source: Kanaalka YouTube ee Found.net. Xusuusnow inaad iska qorto (bilaash) si aad u hesho fiidiyoowyo macluumaad iyo macluumaad badan leh. Waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa talo soo jeedinta ku saabsan waxa muuqaalkeenna dambe uu noqon doono.
Warar dheeraad ah ka sii aqri: Maxay Tahay Inaad Ka Ogaato Daaweynta Mawjadaha Cadaadiska
Sidoo kale aqri: - Sida looga takhaluso cudurka loo yaqaan 'Plantar Fascitis'
Waxaan si aad ah ugu talin karnaa qodobka kore - oo uu qoray lafopractor casri ah oo ku yaal rugta caafimaadka ee kaladuwan Råholt Chiropractor Center (Degmada Eidsvoll, Akershus).
Maxaan sameyn karaa xitaa xanuunka cagta?
1. Dhaqdhaqaaqa guud iyo nashaadaadka waa lagula taliyay, laakiin ku jir xadka xanuunka. Haddii culeyska saameyntu kugu noqdo mid aad kuugu badan inta lagu jiro muddooyinka ba'an, waxaan si adag kuugula talineynaa inaad sii waddo. Ka waran beddelida socodka dardarka iyo socodka duurka ee dhul aad u adag? Ma laga yaabaa inaad ku beddelato mashiinka mashiinka mashiinka lagu beddelo mootada loo yaqaan 'ellipse or ergometer' muddo gaaban?
Saameeyay dhibta cillad ku timaadda ee dhirta iyo fasciito iyo ciribta ciribta? Kubadaha sidoo kale waxay si gaar ah ugu habboon yihiin daaweynta xaaladahaas!
Xaaladaha intooda ugu badan, dhaawac kasta oo ubucda ah waxaa baari kara khabiirka muruqyada (chiropractor, therapist the manual tabi wixii la mid ah), waxaana sii xaqiijinaya baaritaan ultrasound ama MRI halka loo baahdo.
- Sidookale aqri: Intee in le'eg oo intee jeer ayaan qaboojiyaa canqowga
- Sidookale aqri: Jab murug oo cagaha ku dhaca. Ogaanshaha cudurka, sababaha iyo daaweynta / cabbiraadaha.
Qaar ka mid ah sababaha caadiga ah / ogaanshaha xanuunka lugta waa:
osteoarthritis (Xanuunku wuxuu ku xidhan yahay kala-goysyada ay saameeyeen)
Cudurka Bursitis / xabka xannuunka
Cuboid syndrome / subluxation (wuxuu caadi ahaan xanuun ku keenaa banaanka cagaha)
Sonkorowga cudurka macaanka
Fat suufka Caabuq (sida caadiga waxay xanuun ku keentaa suulka baruurta ciribta ka hooseysa)
Cudurka Freiberg (avascular necrosis / unugyada iyo unugyada lafaha metatarsal ee lugta hore)
Cilladaha Haglund (Waxay xanuunka ku sababi kartaa garka lugta hoose, ciribta dambe iyo ciribta dambe)
Spurs ciribta (waxay ku keentaa xanuun gudaha lugta lugta dhexdeeda, badiyaa kaliya ciribta horteeda)
Canaanka ciriiriga ah
metatarsalgia (Xanuun kubbadda cagta iyo lugta hore)
Morton's neuroma (waxay ku keentaa xanuun koronto oo u dhexeeya suulasha dhexdooda, lugta hore)
Plantar fascite (waxay xannuun ku keentaa caleen lugta, oo ay weheliso fascia plantar ka soo baxa ciribta)
Lugaha gogosha / pes planus (kuma eka xanuunka laakiin laakiin waxay noqon kartaa sabab keenta)
Sinus tarsi syndrome (waxay ku keentaa xanuun astaamo ah cagaha dushiisa inta u dhexeysa ciribta iyo sariirta)
Jab murug oo cagaha ku dhaca (jabka daalku wuxuu keenaa xanuun u dhow jabka, badiyaa inta badan metatarsus)
Calaamadaha tunnel tunnel syndrome aka Tarsal tunnel syndrome (badanaa wuxuu sababa xanuun aad u daran gudaha cagta, cidhibta)
turqo (badiyaa laga helaa isku-jirka metatarsus-kii ugu horreeyay, oo ku yaal suulka weyn)
Quadratus plantae myalgia (cillad muruq ah oo sababa xanuun gudaha iyo ciribta horteeda)
laabotooyinka (Xanuunku wuxuu ku xidhan yahay kala-goysyada ay saameeyeen)
Waxyaabaha aan caadiga ahayn ee sababa / ogaanshaha cagaha:
Sawirka raajada cagta - Sawirka Wikimedia
- Raajada cagaha, xagalka dambe (oo laga arko dhinaca), sawirka waxaan ku aragnaa tibia (shin shin gudaha ah), fibula (shin shinka banaanka ah), talus (lafta doonta), kalcanous (cirib), cuneiforms, metatarsal iyo phalanges (suulasha).
Sawirka MRI ee cagta
Sawirka MRI ee cagta - Sawirka IMAIOS
- Sawirka MRI ee cagaha (kor laga arkay), sawirka waxaan ku aragnaa metatarsus, cuneiform, medune cuneiform, lateral cuneiform, navicular lafta (lafaha doon), cuboidus, geedi socodka kalcaneus iyo astaamo kale oo dhowr ah oo anatomical ah.
Sawirka Sagittal MRI ee cagta
Sawirka MRI ee cagaha, jeexitaanka sagittal - Sawirka IMAIOS
- Sawirka MRI ee cagaha, qaybta sagittal (oo laga arko dhinaca), sawirka waxaan ku arkeynaa dhowr isgoysyo muhiim ah, isgoysyada iyo muruqyada. Kuwa kale waxaa ka mid ah, extensor hallucis longus, talocalcaneonavicular joint, extensor hallucis brevis, cuneonavicular joint, tarsometatarsus joint, fibularis longus tendon, flexor digitorum tendon, tibialis anterior tendon, flexor hallucis longus tendon, wadajir anqawga, tendonada calcaneal iyo ciribta ciribta.
Kala soocida xanuunka cagta
Xanuunku wuxuu u qaybsami karaa saddexda qaybood ee daran, subacute iyo raaga.
Xanuun daran oo cagta ku dhaca
Marka loo eego kala-soocidda waqtiga, xanuunka daran ee cagta macnaheedu wuxuu yahay in qofka uu haystay xanuunka wax ka yar saddex toddobaad.
Culeys lugo xanuun ah
Xilliga loo yaqaan 'subacute muddada' waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay waqtiga udhaxeeya ba'an iyo wadada loo maro xaalad dabadheer. Marka la eego waqtiga, tan waxaa lagu qeexaa inta u dhaxaysa saddex usbuuc illaa iyo saddex bilood. Haddii aad xanuun badan dareentay muddo dheer, waxaan si adag kuugula talineynaa inaad kala tashato takhtar si loo baaro iyo daaweyn kasta.
Xanuun cagaha daba dheeraaday
Hadda xannuunadan waxay bilaabayaan inay raad wanaagsan yeeshaan, adigu? Xanuunka cagaha ee daba dheeraaday waxaa loo aaneeyey xanuunka cagaha oo sii jiray muddo ka badan saddex bilood. Waxaan aad uga walaacsanahay wax ka qabashada arrimaha goor hore, maadaama ay tani badanaa kuu horseeddo qaab si fudud oo fudud oo loogu laabto shaqadii caadiga ahayd, laakiin waa inaad sidoo kale ogaataa in xitaa haddii aad u ogolaato inuu wax yar sii fogeeyo, weli ma ahan soo daaho . Waxay u baahan tahay daaweyn ka badan tii ay heli lahayd haddii ay wax ka qaban lahayd dhibaatada in yar uun. Ku haynta xanuunka muddo dheer waxay sidoo kale sababi kartaa xanuunno magdhow ah qaybaha kale ee jirka waxayna kordhin kartaa dhacdooyinka xanuunka jilibka, xanuunka sinta iyo xanuunka dhabarka.
Cagaha. Sawirka: Wikimedia Commons
Daaweynta wadajirka ah iyo daaweynta mowjadaha cadaadiska: Caafimaad ahaan wax ku ool ah oo ka dhan ah dhirta fasciitis iyo metatarsalgia
Daraasad yar oo dhawaan la sameeyay (Brantingham et al. 2012) ayaa muujisay in khalkhal galinta dhirta plantar fascia iyo metatarsalgia ay siisay xasillooni xanuun. Adeegsiga tan iyada oo lala kaashanayo daaweynta mawjadaha cadaadiska waxay siin doontaa xitaa saameyn ka sii wanaagsan, oo ku saleysan cilmi baaris. Xaqiiqdii, Gerdesmeyer et al (2008) waxay muujiyeen in daaweynta mawjadaha cadaadiska ay siineyso horumar statistik ah oo muhiim ah marka ay timaaddo yareynta xanuunka, hagaajinta shaqada, iyo tayada nolosha kadib 3 daaweyn oo kaliya oo bukaannada qaba cudurka doogga dabadheer.
Daraasad meta ah (Aqil et al, 2013) ayaa sidoo kale lagu soo gabagabeeyey in daaweynta mawjadaha cadaadiska ay ahayd qaab daaweyn caafimaad oo la xaqiijiyey oo wax ku ool ah oo loogu talagalay dhirta fascitis.
Maxaan ka filan karaa takhtar caafimaad markaan u booqdo iyaga oo xanuun lugta ah ku jira?
Waxaan kugula talineynaa inaad raadiso xirfadle shati siisay shati dowladeed markaad raadineyso daaweyn iyo daaweynta muruq, lugaha, laabatada iyo xanuunka dareemeyaasha. Kooxahan xirfadaha leh (dhakhtarku, dhakhaatiirta loo yaqaan 'chiropractor', jimicsiga jimicsiga iyo kalkaaliye caafimaad) waa magacyo la ilaaliyo oo ay ansixiyaan masuuliyiinta caafimaadka ee Noorway. Tani waxay ku siinaysaa bukaan ahaan badbaado iyo nabadgelyo aad yeelan doonto oo keliya haddii aad aado xirfadahaas. Sidii aan soo sheegnay, magacyadan waa la ilaaliyaa tanina waxay macnaheedu tahay inay sharci darro tahay in la waco dhakhtar ama loo yaqaan 'chiropractor' adiga oo aan oggolaansho lagaa siin aqoon-kororsigaas aqoonyahannada ah. Taa bedelkeeda, cinwaanada sida acupuncturist iyo naprapat ma aha cinwaanno la ilaaliyo - tanina waxay ka dhigan tahay in adiga bukaan ahaan aadan ogeyn waxaad u socoto.
Takhtarka ruqsada u leh dadweynaha ayaa leh aqoon dheer oo wax ku ool ah oo lagu abaal mariyo masuuliyiinta caafimaadka dadweynaha oo leh ilaalinta magaca dadweynaha. Waxbarashadani waa mid dhammaystiran oo macnaheedu yahay in xirfadaha kor lagu soo xusay ay leeyihiin khibrad aad u wanaagsan xagga baarista iyo ogaanshaha, iyo sidoo kale daaweynta iyo tababbarka ugu dambeeya. Sidaas darteed, takhtarka caafimaad ayaa marka hore baari doona dhibaatadaada ka dibna wuxuu sameyn doonaa qorshe daaweyn iyadoo kuxiran ogaanshaha la bixiyay.
Jimicsiyada, tababarka iyo tixgelinta ergonomic
Khabiir ku takhasusay murqaha iyo xanuunnada qalfoofku waxay, iyagoo ku saleynaya ogaanshahaaga, kuu sheegi karaan tixgelinta ergonomic ee ay tahay inaad qaadatid si looga hortago waxyeelo dheeraad ah, sidaas darteed hubinta waqtiga ugu dhaqsaha badan ee bogsashada. Kadib markii qaybta xanuunka ee xanuunku dhamaato, kiisaska badidooda waxaa sidoo kale lagugu meeleyn doonaa laylisyo guriga ah oo waliba kaa caawinaya yareynta fursada soo noqoshada. Marka ay jiraan xanuunno daba-dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la maro dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ee aad sameyso nolol maalmeedkaaga, si aad u awood u leedahay inaad u xakameyso sababta xannuunkaaga u dhacayo marar badan.
- Halkan waxaad ka heli doontaa dulmar guud iyo liistada layliyo aan daabacnay oo la xiriira ka-hortagga, ka-hortagga iyo yareynta xanuunka lugta, xanuunka cagaha, cagaha adag, cagaha osteoarthritis iyo baaritaannada kale ee la xiriira.
Guudmarka - Jimicsi iyo jimicsi loogu talagalay xanuunka lugta iyo xanuunka cagta:
4 Layliyo ka dhan ah Plantar Fasciit
4 Layli ka dhan ah Plattfoot (Pes Planus)
5 Layliyo ka dhan ah Hallux Valgus
7 Talooyin iyo Daawooyin loogu talagalay Xanuunka Cagaha
Is-ka-caawinta xanuunka lugta
Qaar ka mid ah alaabooyinka ka caawin kara xanuunka lugta, xanuunnada iyo dhibaatooyinka ayaa ah hallux valgus taageero, fidiyeyaasha suulka, sharaabaad riixo iyo isugeynta cagaha.
XIDHIID LA XIRIIR / SELF-CAAWIMAAD: - Taageerada Hallux Valgus (ka akhriso wax dheeraad ah adigoo gujinaya halkan)
La dhibtooday hallux valgus (suul weyn oo qalloocan) iyo / ama koritaanka lafaha (bunion) suulka weyn? Markaa kuwan ayaa qayb ka noqon kara xalka dhibaatadaada.
Qof kasta oo qaba cagaha xanuun iyo dhibaatooyin ayaa ka faa'iidaysan kara taageerada isku-buuqa. Cufnaanta sharaabaadku waxay gacan ka geysan kartaa kordhinta wareegga dhiigga iyo bogsashada kuwa ay saameeyeen shaqada hoos u dhacday lugaha iyo cagaha.
Halkan ka aqri faahfaahin dheeraad ah: - Cadaadiska cadaadiska
Ma waxaad la kulantay xanuun muddo dheer iyo xanuun daba-dheer?
Waxaan kugula talineynaa qof kasta oo xanuun joogto ah ku haya nolol maalmeedka inuu ku biiro kooxda Facebook «Rheumatism iyo Xanuunka dabadheeraadka - Noorwey: Daraasaad iyo Warar«. Halkaan waxaad ka heli kartaa talo wanaagsan oo aad su'aalo ku weydiin kartaa dadka isku fikirka ah iyo kuwa khibradda u leh aagga. Waxaad kaloo samayn kartaa lasoco oo jecel boggayaga Facebook (Vondt.net) cusbooneysiinta maalinlaha ah, jimicsiyada iyo aqoonta cusub ee murqaha iyo dhibaatooyinka lafaha.
Maqaalka laxiriira: - 4 jimicsi oo ka dhan ah fasciitis plantar
Sidoo kale akhri qodobadan:
“Waan necbahay daqiiqad kasta oo tababar ah, laakiin waxaan ku iri,‘ Ha joojin. Hadda xanuunsado oo intaad nooshahay ku noolaada sidii horyaal. » - Muxammad Cali
Brantingham, JW. Daaweynta khaaska ah ee xaaladaha xagjirnimada hoose: casriyeynta dib u eegista suugaanta. J Nidaamka Physiol Ther. 2012 Feb; 35 (2): 127-66. doi: 10.1016 / j.jmpt.2012.01.001.
Gerdesmeyer, L. Daaweynta shucaaca xad dhaafka ah ee shucaaca shucaaca leh waa mid amaan ah oo wax ku ool ah daaweynta daaweynta dabadheerayaasha soo noqnoqda ee loo yaqaan 'recarcitrant plantar fasciitis': natiijooyinka daraasad cadaymo badan oo la-kantaroobay oo lagu xakameynayo placebo-maaddada gacanta. Am J Sports Med. 2008 Noofam; 36 (11): 2100-9. doi: 10.1177 / 0363546508324176. Epub 2008 Oct 1.
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan xanuunka lugta:
Uu xanuun daran ku qabtay cagta. Maxaa sababi kara haddii si lama filaan ah sidan aad ugu hesho cag xanuun?
Xanuunka lugta ee deg deg ah waxaa badanaa keena culeys xad dhaaf ah ama shaqo xumo. Malaha waad ka talaabtay guushii shalay ama socotid adigoon ogayn wax gaar ah oo ku saabsan? Waxa kale oo laga yaabaa inay u sabab tahay xanuunka neerfaha ee ka yimaadda dareemeyaasha cilladaha (tani waxay aad ugu badan tahay haddii aad sidoo kale shucaac / lug hoose lugta ku leedahay). Muruqyada lugaha sidoo kale waxay u tixraaci karaan xanuunka lugta taasna waxay u dhici kartaa mid daran / kadis ah.
S: Cagtayda waan dhaawacay. Maxaa sababi kara?
Jawaab: Macluumaad dheeraad ah la'aanteed, suurtagal ma aha in la helo cilad gaar ah, laakiin waxay kuxirantahay taariikhda hore (ma waxay ahayd jahwareer? Mudo dheer ayey jirtay?) Waxaa jiri kara dhowr sababood oo xanuun lugta ah. Xanuunka lugta waxaa sababi kara tendonitis-ka xididada maskaxda ee xaga sare ee cagaha - ka dib si gaar ah gaar ahaan qeybta loo yaqaan 'extensor digitorum' ama 'extensor hallucis longus'. Sababaha kale waxay noqon karaan jab stress, suulka dubbe / hallux valgus, cuncunka neerfaha, xanuunka loo soo gudbiyo neerfaha dhabarka, tinea pedis (fungus foot), ganglion cyst ama tendonitis ee tibalis hore.
||| Su'aalaha la xiriira oo leh isla jawaab: "Maxaad xanuunka ugu haysaa lugta lugta?"
S: Xanuun cagaha hoostooda, gaar ahaan culeys badan ka dib. Sababta / cudurka?
Jawaab: Waxaa jiri kara sababo dhowr ah oo xanuun cagaha hoostooda, laakiin haddii ay tahay culeys saa'id ah markaa caadi ahaan dhibaato ayaa ka jirta fascia-gaaga (akhri: daaweynta plantar fasciitis), unugyo jilicsan oo ka hooseeya cagta. Daaweynta cadaadiska cadaadiska oo ay weheliso abaabul wadajir ah ayaa ah mid ka mid ah hababka daaweynta ee ugu badan ee dhibaatadan. Sababaha kale ee xanuunka lugta waxaa ka mid ah cillad wada jirka biomechanical, jajabka culeyska fekerka, tendonitis ee tibialis dambe, burburay qaanso (flatfoot), cilladda tunnel tunnel, xanaaqa dareemayaasha, xanuunka loo soo gudbiyo neerfaha dhabarka, lugta jeexitaanka, metatarsalgia, ciriiriga cagta. ku saabsan: suulasha suulasha) ama kabo jilicsan.
||| Su'aalaha la xiriira oo leh jawaab isku mid ah: "Maxaan xanuun ugu hayaa ciribta cagta?", "Maxaad cagaha u xanuunaysaa?", "Maxaan cuncun ugu yeeshay unugyada cagaha hoostiisa?", " Waa maxay sababta aan qabo xanuunka cagta?
S: Xanuun badan ayaa ku leh banaanka cagta. Sababo macquul ah?
Jawaab: Sababta ugu caansan ee xanuun ku dhaca bannaanka cagtu waa dahaadhka ama guntinta guntimaha canqowga, sida qaasatan ah laf-dhabarka tibiofibular lugaha (ATFL), oo waxyeellooba haddii lugtu xad dhaaf noqoto. inversion (marka ay cagtu soo baxdo si ay cagtu uga baxdo gudaha). Sababaha kale waa xanaaqa dareemayaasha, xanuunka tixraaca dareemayaasha laf-dhabarka, cudurada maskaxda ku dhaca, xanuunka loo yaqaan 'peroneal tendonitis', jabka fekerka, finanka / hallux valgus, galleyda / qalliinka arthritis.
||| Su'aalaha la xiriira oo leh jawaab isku mid ah: "Maxaan xanuun ugu hayaa lugta dibadeeda?", "Xanuun xagga lugta ka baxsan. Sababta? "
Bararka cagaha hoostooda hoosteeda hortiisa ciribta hortiisa. Maxay noqon kartaa ogaanshaha cudurka?
Badiyaa waxaad ku aragtaa barar hoosta cagta ciribta hortiisa ciribta plantar fasciitis iyo / ama Spurs ciribta. Bararka ayaa inta badan lagu arkaa inuu ka sii darayo heerka ba'an ee lagu ogaanayo cillad xagga lugta ah oo laga yaabo inuu jiro jilicsanaan muuqata oo aagga ay dhibaatadu ka dhacday.
Su'aalaha la xiriira isla jawaabta: 'Bararka cagaha hoostiisa - maxaa noqon kara sababta aan u bararay?'
S: Muddo intee le'eg ayay qaadataa in laga fiicnaado cudurka metatarsalgia?
Jawaab: Wax walba waxay kuxiranyihiin sababta iyo xaddiga cillad la'aanta ee ku siisa xanuunadan. Khabiir ku takhasusay muruqyada ayaa qiimeyn doona shaqadaada wuxuuna kuu gudbin doonaa baaritaanka sawirka la xiriira haddii loo baahdo. Waxay qaadan kartaa meel kasta oo ka mid ah dhowr maalmood illaa dhowr bilood - tan dambe waxaa sidoo kale loo yaqaannaa xanuun joogto ah (in ka badan 3 bilood), ka dibna waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto tallaabooyin kale sida qiimeynta booska cagaha / cagaha ama wixii la mid ah.
Maxay cagaha ugu shaqeeyaan cagaha iyo hoosta cagta?
Mid ka mid ah sababaha ugu badan ee xanuunka iyo xanuunka ku dhaca cagaha hoostiisa, iyo gaar ahaan ciribta hore ciribta waa baaritaanka lagu yaqaanno. plantar fasciitis. Suurtagalnimada kale waa carada jilicsan iyo muruqyada.
S: Dulmar guud oo ku saabsan dareemaha dhirta ee cagta?
Jawaab: Halkan waxaad ku haysaa sawir muujinaya neerfaha dhirta ee lugta. Cagta dhexdeeda waxaan ka helaynaa neerfaha dhirta dhexe, wadada loo baxo banaanka cagaha waxaan ka helaynaa neerfaha dhirta dambe - inta u dhexeysa suulasha waxaan ka helaynaa neerfaha dhijitaalka ah ee caadiga ah, kuwani waa kuwa ay saameyn karto waxa aan ugu yeerno Morton's Nevrom Syndrome - oo ah nooc ka mid ah noodhka neerfaha xanaaqa. Morton's neuroma syndrome badanaa wuxuu dhacaa inta u dhexeysa labada suxul iyo suulasha saddexaad, ama suulasha saddexaad iyo afraad.
Dulmarka jirka ee dareemayaasha dhirta ee lugta - Photo Wikimedia
S: Xanuun ku dhaca dheefshiidka dheecaanka dhegaha inta lagu jiro orodka?
Jawaab: Caadiyan, dheecaanka dheefshiidka dheecaanka dheecaanka dheecaanka dheefshiidka ayaa dhici kara inta lagu jiro orodka, taas oo ay ugu wacan karto culeys xad dhaaf ah ama kabo xumo. Waxay leedahay laba hawlood: Kala-goynta canqowga (suulka kor u qaad) iyo fidinta (dhabarka gadaal) ee suulasha.
- Su'aalaha la xiriira ee isla jawaabta ah: 'Miyaa xanuun laga heli karaa ekstendus digitoriu longus?'
Extensor Digitorum Longus Muskelen - Sawirka Wikimedia
S: Xanuun ma ku yeelan kartaa dhererka halluccus Longus marka aad ordaysid?
Jawaab: Sida iska cad, xanuunku wuxuu ku sababi karaa dheelitirka hallucis longus inta lagu jiro orodka, taas oo ay sababi karto, waxyaabo kale, fashil (laga yaabee inaad overpronate tahay?) Ama si xad dhaaf ah (waxaad saacado badan socodsiineysay?). Tilmaamaha waxaa ka mid ah fidinta suulka weyn, iyo sidoo kale gacan ka geysashada jilibka canqowga. Sidoo kale waa, illaa xad, muruq dillaac / daciifnimo daciif ah. Waa tan sawir ku siinaya muuqaalka jirka:
Murqaha Extensor Hallucis Longus - Sawirka Wikimedia
Su'aal: Dulmarka muruqyada lugta bannaanka hore ee lugta oo sawir leh?
Jawaab: Dhanka cagta ciribta / canqowga waxaan ka helnaa sedex nus oo muhiim ah oo ka shaqeynaya xasilinta canqowga. Waxaa loo yaqaan laf-dhabarka (dhabarka) talofibular ligament, ligamentada calcaneofibular og ka dambeeya (ka dambe) talofibular ligament. Xiisadda murqaha (oo aan dillaacin), dillaac qayb ahaan ah ama dillaac dhammaystiran oo kuwan ka mid ah ayaa dhici kara haddii ay dhacdo dhaawac soo noqnoqda, waxa aan noorwiijiga wanaagsan ugu yeerno 'ruxidda canqowga'.
Xiidmaha lugta bannaanka - Sawir: Caafimaad ahaan
Lene Hansen wuxuu leeyahay,
Hi, 3 sano ka hor waxaan ka jabay canqowga midig, waxaan ku jiray fasax waxaana ku socday 3-4 usbuuc ka hor intaanan helin MRI taasoo muujisay jabka Udislocert ee colum tali. Waxa uu la halgamayay in ka badan hal sano oo xanuun, markii ay nafis uun ahayd daawadii, waxay ku jirtay kabo 3 bilood ah, oo uu bilaabay inuu ka xanuunsado cag ka soo horjeeda (galbeedka), wuxuu la socday xanuun joogto ah oo labada cagood ah 2dii sano ee la soo dhaafay. , oo ahaa oo qaatay MRI ee lugta bidix, midda aanan jebin Janaayo sanadkan, taas oo muujisay: Isbeddelka Cystic ee qaybta u dhow ee MT3, muuqaalka sida ganglion intrasosseous. Waxa aad arkaysaa dareere waxoogaa kordhay oo ku jira qaybaha jilicsan ee u dhexeeya caput MT1, MT2, MT3, MT4 iyo MT5 kaas oo ku jira bursitis interphalangeal, waxay ahayd wakhti dheer oo sugitaan ah labadaba MRI iyo la tasho dhakhtarka lafaha.
Waxa uu la socday dhakhtarka lafaha ee bishii Maajo kaas oo qaatay jawaabaha MRI tixgaliyay oo baadhay cagahayga, taas oo muujisay in aan qabo cavus weyn oo leh calcaneus varius, labada cagood ee qalloocan ayaa ah kuwo aad u jilicsan, sababtoo ah xanuunka ku fadhiya gudaha cagta. cirifka iyo dhabarka cagta, wuxuu u maleeyay in ay sidoo kale u dhiganto koorsada fog ee tibialis dhabarka dambe. Waxa la soo gudbiyay si loo helo insoles-ka, kabahaas ayaa ahaa kuwo aad u adag oo aan awoodin in la isticmaalo, hadda waxaa la sameeyay oo la sameeyay daabacaad cusub iyo dhejisyo loogu talagalay sariiro cusub oo jilicsan, dhakhtarka lafaha ayaa ka hadlay qaliin u muuqday mid weyn oo dhib badan sidii hore. micitaan . Waxaan leeyahay shaqo nolol maalmeedku ka kooban tahay socod iyo istaag badan, xanuunkuna wuxuu cunaa maskaxda iyo nolosha bulshada shaqada ka dib, xanuunku wuxuu bilaabay inuu kor u kaco anqawga iyo lugta. Ma jiraan jimicsi ama tallaabooyin kale oo la fulin karo si loo helo nolol maalmeed ka wanaagsan? Waad ku mahadsan tahay Lene
Runtii tani waa kiis adag oo aad halkan ku keento. Jajabka aan la daboolin wuxuu la mid yahay jabka timaha - waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday in waqtiga curyaaminta ay tahay inay ahaato mid gaaban, maadaama ay bixiso bogsiin ka fiican oo degdeg ah oo si tartiib tartiib ah u kordheysa maaddaama lugta ay u adkeysan karto tan. Nasinta muddada dheer ayaa nasiib darro ah waxay keentaa murqaha murqaha muruqyada muhiimka ah iyo sidaas awgeed fursad sare oo ah cudurrada muddada dheer.
Kooxda ganglion ee u dhaxaysa MT3 iyo MT4 waxay si cad cadaadis u saari kartaa dareemaha interdigital waxayna saldhig u tahay calaamadaha la mid ah Morton's Neuroma. Marka la isku daro xanuunada kala duwan iyo ogaanshaha cudurka ee aad qabto, waxaad fahmaysaa sababta ay tani u noqotay dhibaato waqti dheer oo adag.
Nasiib darro, ma arki karno in hagaajinta keliya ay kugu filnaan doonto inaad ka baxdo wareegga xun ee aad ku dhegtay.
Ma jirto "dhakhso u hagaajin" dhibaatadaada horumarsan, laakiin joogto ah oo ka kooban jimicsiga cagaha (tusaale, kor u qaadida suulasha iyo wixii la mid ah), is-dullida rullalusha cagta ama wax la mid ah - iyo sidoo kale daaweynta dibadda ee qaabka tusaale ahaan. daawaynta mawjadda cadaadiska (calamadaha nasinta) ama daryeelka cagaha ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku habboon tahay.
Sababtoo ah sida aad ogtahay, nasiib daro maahan in uu jiro dammaanad qaliinka ah. Waa halkii kiiskii in habsocodku uu horumarsan yahay, way weyn tahay fursadda saamaynta ka dib iyo saameyn la'aanta.
Layliga aan soo sheegnay waa caajis, si daacad ah, waxayna qaadan doontaa waqti dheer ka hor inta aanad ogaanin saamaynta, laakiin haddii aad si joogto ah u hesho oo aad si ula kac ah u shaqeyso, waxaan hubnaa inaad saameyn ku yeelan karto tababarkaas.
Fiiri tusaalooyinka jimicsiga cagta halkan.
Victoria wuxuu leeyahay,
Hi, waxaan ahay 12 jir oo cagtaydu waxay ku dhacday miiska jikada. Ma kala bixin karo suulashayda mana istaagi karo mana socon karo - aad bayna ii xanuunaysaa. Ilaa intee ayay socon kartaa?
Halkan waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto GP-gaaga si uu u baaro - tani waxay ku saleysan tahay xaqiiqda ah inaadan istaagi karin ama socon karin. Sawir ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto si meesha looga saaro dhaawacyada lafaha ama wixii la mid ah
Waxa uu xanuun ka dareemayay lugta midig in ka badan 1 sano, waxa uu ku jiray raajo, waxaana laga helay ciribta ciribta, laakiin waxa uu noqday mid aad uga sii darnaa xanuunka dhabarka cagta oo barar iyo ka soo bax ah oo ku soo kordhay iyo kaas oo aad u xanuunsada. Waxa uu xanuun ka dareemayaa anqawga mararka qaarna waxa uu dareemaa qallafsanaan iyo xanuun in uu dhaqaaqo. Xanuunku wuxuu soo ifbaxayaa ilaa sinta - gal raajo mar kale si aad u aragto waxa uu noqon karo.
Trond wuxuu leeyahay,
Leh lugo nasasho la'aan. Markaa waxaad haysataa maqaal ku saabsan nooc ka mid ah "taageerada cadaadiska" ee lugta ku wareegsan oo ay tahay inay ku riixdo murqaha?
Ma ii sheegi kartaa qofka aan la xiriiro marka aan la dhibtoonayo suulka cagahayga? Mar-mar kala goysyada oo xanuuna iyo mararka qaarkood qandho. Xanuun baa ka qabay shabagga oo tani xoogaa way yara yaraatay. Ma lafo-raac, homeopath, acupuncturist, physiotherapist, lafopractor ama daaweeyaha gacanta waa inaad u tagtaa? Waxaan aaday raajo si aan u eego. Mararka qaarkood ma dheeli karo xanuunka dartiis, marar kalena si fiican ayey u socotaa. Waxaan ku noolahay dibadda "waddanka". Miyay ahayd in aan MRI sameeyo?
Daaweynta fasciitis plantar: Plantar fasciitis taageeridda ciribta. Vondt.net | Waanu kaa khafiifinaynaa xanuunkaaga. wuxuu leeyahay,
Cag xanuun […]
Sidee looga takhalusaa urta xun ee kabaha, boorsada jimicsiga iyo boorsada dhabarka? Vondt.net | Waanu kaa khafiifinaynaa xanuunkaaga. wuxuu leeyahay,
Lugaha xanuunka - daawaynta bunion, suulka dubbe iyo hallux valgus. Vondt.net | Waanu kaa khafiifinaynaa xanuunkaaga. wuxuu leeyahay,
Daaweynta ciribta ciribta iyo xanuunka ciribta - oo leh taageerada cidhibta ergonomic. Vondt.net | Waanu kaa khafiifinaynaa xanuunkaaga. wuxuu leeyahay,
Is-daawaynta iyo nasinta xanuunka cagta iyadoo lagu duugayo sariirta ciddiyaheeda. Vondt.net | Waanu kaa khafiifinaynaa xanuunkaaga. wuxuu leeyahay,
Intee in le'eg iyo inta jeer ee aan qaboojinayo murgacashada canqowga? Vondt.net | Waanu kaa khafiifinaynaa xanuunkaaga. wuxuu leeyahay,